Ejiri TENAA mara nkọwa nke Redmi Rịba ama 9 Gam akporosis
Ejiri TENAA gbaara nkọwa ndị Redmi Rịba ama 9 [Foto]
El Ihe ngosi RedN 9 Ọ bụ otu n'ime ekwentị ndị na-esonụ ndị ọrụ China ga-enye. Anyị nwere nke gị Pro dị iche, nke bịara na Qualcomm Snapdragon 720G na ezigbo ego maka ego, ọ bụ ya mere ejiri mara ụdị ụdị niile a.
Ihe nyocha nke ụlọ ọrụ ahụ abanyela na nchekwa data TENAA, otu ikpo okwu nke nwere asambodo nke kwadoro ya dị ka etiti dị n'etiti kwesịrị otuto na nke ahụ ga-enwe ọnụahịa mara mma nke ukwuu maka mmefu ego niile.
Dabere na TENAA, ngwaọrụ ka na-echekwa ihuenyo teknụzụ IPS LCD. Nke a nwere ihe ngosi nke 6.43 sentimita ma mepụta mkpebi FullHD + nke 2,340 x 1,080 pikselụ. Ọ na-ewepụkwa iji ọkwa mmiri mee ka ọ nwee ohere maka obere perforation nke na-ahụ maka ịnweta ihe mmetụta 13 MP n'ihu.
Nhazi ahụ edepụtara maka ọnụ ya, nke akọwapụtara n'okpuru koodu aha ahụ bụ M2003J15SC, nwere isi asatọ ma na - eme ka ọnụ ọgụgụ ume ọhụrụ kachasị elu nke 2.0 GHz. Helio G80 nke Mediatek dere, ma nke a bụ ihe ga-adị mkpa iji gosi na mgbe e mesịrị.
Ihe ngosi Redmi Rịba ama 9 bụ 8,9mm ma tụọ naanị 198g. Ekwentị na-esokwa batrị 4,920 mAh nke, ọ bụ ezie na ekwughị ya, ga-anya isi na teknụzụ na-ebu ọkụ ngwa ngwa 18W. Ngwaọrụ ahụ ga-enwe nsụgharị 4GB, 6GB na 8GB RAM, yana 32GB, 64GB na 128GB nhọrọ nchekwa dị n'ime.
Redmi Rịba ama 9 na TENAA
Maka foto, enwere ihe mmetụta 48 MP kachasị na nhazi azụ quad. Ekwentị ga-agba ọsọ na sistemụ arụmọrụ nke gam akporo 10, nke ga-enwe ezigbo MIUI 11 overlay, ma nwee onye na-agụ akara mkpịsị aka n'azụ. Njirimara ndị ọzọ na nkọwa nke ọnụahịa na nnweta anyị ga-ama ma emechaa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ejiri TENAA gbaara nkọwa ndị Redmi Rịba ama 9 [Foto]
Ngwa kachasị mma sitere na ụlọ ahịa F-Droid na 2020 (na-enweghị trackers)